Kitra vehivavy- Teratany malagasy : miketrika ny hitsara ny “Mondial 2023” i Lidwine | NewsMada
Anisan’ireo mpitsara baolina kitra vehivavy malagasy, hiady toerana amin’ny “Mondial 2023”, Rakotozafinoro Pélagie Lidwine. Tafiditra ao anatin’ireo 19 “présélectionnées” eto Afrika, ny tenany. Tsiahivina fa ny volana jolay 2023 ny hanaovana io fihaonana an-tampony amin’ny baolina kitra vehivavy io ka firenena roa no hampiantrano izany dia i Aostralia sy i Nouvelle-Zelande.
Ao anatin’ireo mpitsara mpanampy i Lidwine, amin’ity. Tsy vaovao amin’io sehatra io izy fa efa maro ireo lalao iraisam-pirenena notsarainy, toy ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, sokajy zandriny lehilahy, ny lalao afrikanina sy ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany. Manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao amin’izany izy ary mahafehy tsara izany lalao izany.
Marihina fa 8 ireo mpitsara afovoany ary 11 ireo mpitsara mpanampy, hanaovana ny fifantenana farany, izay mendrika ho any amin’io fiadiana ny ho tompondaka eran-tany io. Mahatratra 156 ireo mpitsara baolina kitra vehivavy maneran-tany hifanandrina hiady toerana hitantana io “Mondial 2023”, sokajy vehivavy io.